Izixhobo - iFujian Shengyang Pipeline Technology Co, Ltd.
Umgca wemveliso yombhobho omtsha owamkelwe yi-Shengyang Technology ulungele ukukhutshwa kwemibhobho eyahlukeneyo ye-polyolefin. Umgca wemveliso uneqondo eliphezulu lokuzenzekelayo, imveliso ezinzileyo kunye ethembekileyo, kwaye inokubonelela ngaphakathi nangaphandle komaleko odityanisiweyo kunye ne-multilayer edityanisiweyo yombhobho extrusion yemibhobho enobubanzi obukhulu.
I-Shengyang Technology ine-advanced advanced machine yokubumba enolawulo oluchanekileyo lwenkqubo, imveliso ephezulu kunye nomgangatho ozinzileyo. Iseti ehambelana ngumngundo ofanelekileyo kumbhobho ofanelekileyo uyafumaneka kubathengi.
Echanekileyo izixhobo welding engile ezininzi ugqibezela ezinkulu-ubukhulu ofanayo umbhobho izixhobo.
Uvavanyo lomgangatho olungqongqo
I-Shengyang Technology isebenzisa ngokungqongqo i-ISO9001: Inkqubo yolawulo lomgangatho ka-2008 kwaye ibambelela kubaluleko kwinkqubo yolawulo. Ukuqinisekisa indawo yokuqala ephezulu, imigangatho ephezulu, iziko lovavanyo lixhotyiswe ngovavanyo olubanzi kunye nezixhobo zovavanyo. Ukusuka kwimpahla eluhlaza ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo, uhlolo olungqongqo lwenziwa rhoqo kwiiyure ezisi-8. Ukuvavanywa kovavanyo lwefuthe lesando kunye novavanyo lweVicat. Olu vavanyo luqinisekisa ukuba sisebenzisa ezona zinto ziluhlaza zisemgangathweni ophezulu kwaye sivelisa iimveliso ezihlangabezana nemigangatho. Iimveliso ze "Shengyang" ziphawulwe ngokungqongqo ngeeshifti zemveliso kunye nemihla yokuvelisa, ukuze umgangatho wemveliso ubekwe esweni kwaye ulandeleke.